Umzi mveliso we-Cast Iron Griddle -iTshayina abaThengi beSinyithi se-Iron
Iinkcukacha zemveliso: HF 4626-1, HF 4626-2 Izixhobo: ubungakanani besinyithi: 45 * 25CM, 46 * 26CM Ukupakisha: ibhokisi yesipho okanye ibhokisi emdaka 1.Icala eligudileyo lilungile ngokwenza isandwich eshiziweyo kunye namaqanda kunye nepancakes. Icala elinembambo lilungile ekutyeni ngokutya okune-steak, intlanzi, inkuku kunye neenciniba.
Iinkcukacha zeMveliso: HF 202 HF 203 HE 203L Izixhobo: Cast iron size: 37.5 * 23CM 43 * 23.5CM 70.5 * 35CM Ukupakisha: ibhokisi yesipho okanye ibhokisi emdaka 1.Lecala eligudileyo lilungile ngokwenza isandwich eshiziweyo kunye neqanda kunye nepancakes. Icala elinembambo lilungile ekutyeni ngokutya okune-steak, intlanzi, inkuku kunye neenciniba.
Phosa i-Iron Preceasoned Griddle
igama lemveliso yaphosa intsimbi eguqukayo yomqolo wobubanzi obungama-43x23cm ukuphakama okuyi-1.5cm ukubekwa kwangaphambi kokupakisha ibhokisi emdaka okanye umbala wombala uphawu lwento eyenziwe ngokwezifiso Ukugcina ubushushu ngokugcinwa kobushushu Kufanelekile kuzo zonke izitovu Ogqibeleleyo ekuphekeni nasekuncedeni iinxalenye zemifuno, amacala, kunye neesuphu Kubonelela ukugcinwa kobushushu okungalinganiyo kunye Ukufudumeza; izimbobo zetywina ekunambeni ngelixa izibambo zivumela ukuthutha ngokulula i-FDA evunyiweyo yensimbi yangaphambi kwexesha elifanelekileyo ivumela ukusetyenziswa kwangoko kunokuba ...